Iincwadi ezi-6 malunga neeholide zale holide kunye naye wonke umntu | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Iincwadi, Iincwadi zoLutsha, Inoveli, Inoveli yothando, Imibongo
Inyanga ka julio ikhutshwe nje kwaye uninzi lwenu luya kube luza kufika (okanye sele lwenzile) kwiindawo zenu zeholide kukhethwa. Bona thaca phambi iinyanga ezimbini zekhefu okuninzi okanye encinci yokwenza. Iya kubakho ke ixesha Yonke into kwaye, ewe, ukufunda.
Kukho olu khetho Iincwadi ze-6 Zonke iintlobo zabafundi. Zakudala, ezothando, ezothando, imibongo… Ukucima, cima, cinga okanye wonwabe. Makhe sizibone.
1 Incwadana yokubhala yeholide
2 Iminyaka emibini yeholide
3 Iholide kaNicolas omncinci
4 Ikhefu lothando
5 Iveki enye yeholide
6 Iiholide zeSaint-Tropez
Incwadana yokubhala yeholide
Ithunyelwe kwi 2014, lo msebenzi wembongi, ugqirha wezobugcisa nomguquleli ULuis Alberto waseCuenca ufumene iMbasa yeSibongo yeSizwe ngowama-2015. Incwadana yokubhala yeholide - iqokelela, yahlulahlulwe yaba ziipigraphs ezisibhozo, yimibongo engamashumi asibhozo anesihlanu ebhaliweyo, ubukhulu becala kwihlobo phakathi kuka-2009 no-2012. Incwadi apho ungafunda khona iivesi ezinje ngezi: "Thina bantu benyama senziwe ngamaqhekeza angamashumi amabini: / abalishumi elinethoba kunye nomntu ophucukileyo." Ukhetho olufanelekileyo njengokufunda kwezona mimoya zimbongi.
Iminyaka emibini yeholide
Awungekhe uphuthelwe jules verne classic kwaye kuncinci ehlotyeni naseholideyini. Ke eli bali lilungele abo abafundi abancinci nabangenaloyiko.
Abalinganiswa abaphambili ngaba ishumi elinesihlanu wobuzwe obahlukeneyo, emva Ukwaphuka kwenqanawa kwenqanawe apho babehamba khona ngenxa yenkanyamba, baphelela ku Isiqithi sepacific. Ke kuya kufuneka benjenjalo funda ukusinda kwindawo engenabuntu nesithukuthezi. Kuzo zonke iingxaki ziya kongezwa ukufika kwe- abanye izinto ezinobungozi kakhulu. Kwaye eyona nto intle ukwazi ukuba baya kuhlangulwa na okanye hayi kukuyifunda ngoku.
Iholide kaNicolas omncinci
De URené Goscinny, omnye wabadali be-Asterix kunye ne-Obelix, kunye UJean-Pierre Sempé. la uthotho lwabantwana UNicolás omncinci uqulethe izihloko ezininzi kwaye le yeyona nto imiselwe iiholide.
Abazali bakaNicolás bamothusa ngeendaba zokuba Iholide yehlobo elunxwemeni. UNicolás wonwabe kakhulu kuba uyawathanda amaza, isanti kunye nokudlala imidlalo nabahlobo… ayizukubaluleka ukuba imozulu imbi. Umbuzo ngulo sukudikwa kwaye uNicolás uza kuza neendlela ezininzi zokungayenzi. Kunyaka emva koko, nakwiholide, uNicolás uza kuya Ikampu eBlue, Apho awuzukuba nalo ixesha lokuba udikwe.
Ewe, ewe, amabali othando ngekhe alahleke eholideyini. Ke uyahamba, ukusuka kumbhali UIsabel ucocekile, i ligama elingento yommisi woluntu Madrilenian, ophakathi kweenoveli kunye namabali, sele epapashe imisebenzi elishumi elinambini.
Kule nto usixelela ibali lika Natasha, Enomazibuthe weirdos, ngakumbi iingcungcuthekiso ezikrelekrele. Wonke umntu uyamxelela kwaye emva kokusilela kwakhe, isigqibo sokunika uthando iholide. Kodwa ngenye imini iyavela Jorge, umphathi wakhe omtsha, indoda ezolileyo kodwa enobuntu obomeleleyo, eyenziweyo kwaye ekholelwa kuthando lwenene. UNatasha akazukuphepha ukutsalwa ngaphezulu kweakhawunti nguye.
Iveki enye yeholide
Kwaye uyishiya njani ifayile ye- Ukuchukumisa ehlotyeni. Ngaba inoveli emfutshane yombhali ophikisayo waseFrance UChristine Angot uthathe Ibhaso leSade Ngo-2012, awayenqabile ngenxa yokungayithathi ingqalelo inveli yakhe. Nangona kunjalo, umba-Indoda eqolileyo ichitha iintsuku ezimbalwa ikhefu kwiiAlps kunye nomfundi oselula-Iinkcazo ezineenkcukacha zesondo zibonisa enye into. Kakhulu impikiswano uyijikelezile, kungcono ujonge kwaye uzigwebe.
Ndigqiba nge inoveli yothando ukumkanikazi zilungele iholide. UDanielle steele Ungomnye wababhali abafundwayo ngokubanzi kwihlabathi ngamabali akhe othando kunye nokudana. Kule izibini ezitshatileyo ezintathuAbahlobo bexesha elide, bayahlangana eSt Tropez ukuxhasa umhlolo womnye wabo.
Nangona kunjalo, xa befika apho bafumanisa ukuba Indlu iincwadana zabakhenkethi a indlu endala phantse ngamabhodlo. Kodwa i ngaliswa eyona ibalaseleyo kuzo zonke iya kuba iqabane elitsha Ebonisa uRobert, umdlali omncinci omangalisayo oya kuthi abangele ukungqubana okungaphezulu kwesinye nomntu wonke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Iincwadi ezi-6 malunga neeholide zale holide kunye nabantu bonke
Amabinzana abanye babhali abazalwa ngoJulayi.